के कारणले बढ्दै छ बलात्कार, कसरी गर्न सकिन्छ नियन्त्रण ? « News24 : Premium News Channel
के कारणले बढ्दै छ बलात्कार, कसरी गर्न सकिन्छ नियन्त्रण ?
काठमाडौं । बलात्कार अहिलेको एक चर्चाको विषय हो । बलात्कार शब्दको अर्थ इच्छा विपरीत जबर्जस्ति वा सम्भोग गर्ने काम वा बलपूर्वक सतित्व नष्ट पार्ने काम हो । सामान्यतया बलात्कार महिलामा मात्र हुने ठम्याई छ, र सबै भन्दा बढी बलात्कार देखिने पनि स्त्रीमा नै हो । तर पनि के बुझ्न जरुरी छ भने बलात्कार महिला वा पुरुष जो कोहिमा हुन सक्दछ ।
भुपेन्द्र पाण्डे (के आर पाण्डुलिपी)
बलात्कार कसैको इच्छा विपरीत दबाबमा राखी, ललाई फकाई , बल्याकमेल गरी, कसैलाई सकसमा पारी उ बाट यौन आनन्द लिने र यौन क्रिडा पूरा गर्ने एक प्रक्रिया हो । यसरी हेर्दा बलात्कार खराब यौन मानसिकता र यौन आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसकी सृजित हुने एक समस्या हो । यसलाई प्रशय दिने काम समाजका केही संयन्त्रले गरेको देख्न पाइन्छ।
‘मर्दकी सात वटी स्वास्नी’, ‘आइमाई भनेको ओछ्यान हो’, ‘खुट्टा भए जुत्ता जति पनि मिल्छ’ भन्ने जस्ता समाजमा प्रयोग हुने उखान शब्दहरूले प्रशय दिने गरेको देखिन्छ। यस्ता शब्द उखान समाज भेग र सम्प्रदाय अनुसार फरक फरक हुने गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा बलात्कारलाई सामाजिक मुद्दा र मानसिक समस्या देखिछ ।
बलात्कारका सामान्य कारण
बलात्कारका कारण धेरै हुन्छन् । ब्यक्ति विशेष फरक कारण पाइएलान तर यहाँ समग्रमा मूल दुई कारणलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१ यौन आबेग र मानसिक असन्तुलन
२ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्ष
यौन आबेग –
बलात्कारको एक प्रमुख कारण हो यौन आबेग । यो मानिसमा भएको एक शक्ति वा क्षमता हो । यस्लाई दुई भागमा बाडेर हेरिने गरिन्छि ।
क) प्राकृति यौन आबेग
प्राकृतिक यौन आवेग भन्नाले प्राकृतिक रूपमै प्राप्त हुने यौन उत्तेजना हो । जसलाई जन्मजात यौन उत्तेजना भन्न सकिन्छ । यस्तो प्रकारको उत्तेजना निश्चित समय स्थान र अवस्थामा मात्र प्राप्त हुन्छ । यो कुनै यौन साथीको स्पर्श , कुनै प्रकारको यौन हाउभाउले गर्दा व्यक्तिमा आउने यौन उत्तेजना हो । यस्तो प्रकारको उत्तेजना आउन बाह्य कुनै प्रकारको औषधि वा यौन उत्तेजक बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।
यो निश्चित समय स्थान र अवस्थामा केन्द्रित हुने हुन्छ । साथै किशोर किशोरीमा बढ्दो उमेरको प्रभाव सङ्गै शारीरिक र मानसिक परिवर्तनले यस्तो प्रकारको उत्तेजना पैदा हुने गर्दछ । यस्ता यौन उत्तेजना नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । र यस्ता उत्तेजना ले बलात्कारमा खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन ।
ख) मानसिक समस्या
विशेष गरी यसमा यौन मानसिक अवस्थाको कुरा हेर्दा । यसमा विकृत यौनका पक्ष हरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।
– असामान्य बस्तु बाट यौन उत्तेजना
-कसैलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नु
– आधिपत्य जमाउने मनासय
– बदलाको भाव
– एकोहोरो प्रेम
आदि इत्यादि जस्ता कुरा मानसिक समस्यामा पैदा गर्छन् र जसको कारण बलात्कार हुन्छ ।
सामाजिक , सास्कृतिक र आर्थिक पक्ष
यसले व्यक्ति कस्तो समाज कस्तो संस्कार र वातावरणमा हुर्किएको छ । उसले के कुरा सिकेको छ,र कस्तो व्यवहार पैदा गर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । विशेष गरी समाजका ठुला वडाहरूले गरेको गल्ती लुकाउने , ‘मर्दकी सात वटी श्रीमती’ भन्ने जस्ता संस्कार मान्ने, आर्थिक रूपले विपन्नलाई दवाई उनीहरूको शोषण गरी यौन चाहाना पूरा गर्ने समुदाय र संस्कारमा हुर्केका व्यक्तिले यस्ता व्यवहार देखाउछन र दोहोराउछन । सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा बनेका मूल्य मान्यता नीतिहरूका कारण यस्तो हुन्छ । पद र पावरमा भएका व्यक्तिले सीमान्तकृत वर्गमा गर्ने यौन दमन जस्ता अनेक कारणले बलात्कारलाई प्रशय दिएको पाइन्छ । यस्ता कारणले नै बलात्कार हो भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन ।
बलात्कारका सिकार हुने प्रमुख उमेर समूह
हामीले देखेर सुने अनुसार सबै भन्दा बढी बलात्कारको सिकार हुने समूह आश्रित समूह हो । नेपालको परिपेक्क्षमा पनि यो आँकडा हेर्न सकिछ । पछिल्लो २ महिनामा सामुन्ने आएका बलात्कारको घटना हेर्दा सबै भन्दा बढी बालिका छन्न । त्यो पनि बिधालय उमेरका बालिका भने केही ६०ं वर्ष कटेका वृद्ध देखिन्छन् । किशोर र यौवन अवस्थामा भएका बलात्कृत समूह सामूहिक बलात्कार वा बल्याकमेलिङ्ग को कारण बलकृत भएकी देख्न सकिन्छ ।
१ उनीहरू सजिलै प्रतिकार गर्न सक्दैनन् , बलात्कारी सजिलै आफूमा भएको बलको कारण उनीहरूलाई काबुमा राख्न सक्दछ ।
२ यो उमेर समूहलाई फकाउन र मनाउन सजिलो हुन्छ।
३ डर धम्की देखाएर डराउन सजिलो हुन्छ ।
४ यो उमेर समूहले सजिलै समाजमा, अभिभावक, आफन्तसँग कुरा खोल्न डराउछन र बलात्कारीले बार बार प्रयोग गरी रहन सक्दछन् ।
५ यो उमेर समूह आफूमाथि भईरहेको व्यवहार राम्रो हो या नराम्रो छुट्टाउन सक्दैनन् ।
आदि इत्यादि कारणले यो उमेर समूह प्रयोगमा आउँछ । यौवन आस्थाका किशोर र किशोरी सामूहिक बलात्कारको सिकार बन्दछन् । किनकि उनीहरूमा प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धरै शक्तिको प्रयोग गरिन्छ । भने यिनीहरू आफ्नो कमजोरीको कारण वा बल्याकमेलिङ्गको सिकार बनेर बलात्कृत हुन्छन् ।
कसरी गर्ने बलात्कार नियन्त्रण ?
बलात्कार नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै एक पक्ष मात्र लागेर हुँदैन । यसका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज र सरकार सबै एकजुट भएर लग्नु पर्छ । जसका लागि व्यक्तिबाट यो अभियान सुरु गरिनु पर्छ र यसबाट परिवार समाज र देश भरि बलात्कार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
बलात्कार नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै एक पक्ष मात्र लागेर हुँदैन । यसका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज र सरकार सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्छ । जसका लागि व्यक्तिबाट यो अभियान सुरु गरिनु पर्छ र यसबाट परिवार समाज र देश भरि बलात्कार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
क) शिक्षा प्रदान गर्ने : यसमा विशेष गरी यौन शिक्षालाई जोड दिइनु पर्छ । बालबालिकादेखि परिवारका सबैलाई बालबालिका माथि हुने यौन अपराधको बारेमा बुझाएर सजग हुन सिकाउनु पर्दछ । भने नचिनेका मानिस बाट बच्ने सल्लाह दिनुपर्छ । आफ्नो छोराछोरीलाई उमेर अनुसार आउने परिवर्तनका बारे बताई सजग बनाउनु पर्छ । यौन हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारले समाजमा पार्ने असर बारे बताउनु पर्छ । जनचेतना यौन हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार सम्बन्धी जनचेतना जगाएर सबैमा सचेत बनाउनु पर्छ ।
ख) कडा कानुन निर्माण : यो सरकारले तथा सामाजिक रूपमा यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई कार्बाहिको दायरमा ल्याउनका लागि कडा कानुन तयार गर्नुपर्छ । साथै यस्ता कार्य गर्नेलाई उन्मुक्ति नदिने हुनुपर्छ । साथै निर्दोष व्यक्ति नफस्ने गरी सामाजिक र सरकारी समयन्त्र तयार गरिनु पर्छ । बलात्कारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु पर्छ भने । यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसा गर्ने लाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।
माथि उल्लिखित उपाय यी मात्र सर्व श्रेष्ठ हुन्न भन्ने होइन । यस्ता अन्य विकल्प पनि छन् । सामान्यतया यति मात्र गर्न सके पनि बलात्कार र यौन हिंसा जस्ता समस्या समाधान कि बाटो खुल्छ । र बलात्कार को सिकार भएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन ।